बैंकर रविनासँग नायीका प्रियंका कार्कीले खिचेका तस्विर यसरी भए 'भाइरल' !
ARCHIVE, INVESTIGATION » बैंकर रविनासँग नायीका प्रियंका कार्कीले खिचेका तस्विर यसरी भए 'भाइरल' !
काठमाडौँ - नायीका प्रियंका कार्की र बैंकर रविना देशराजले खिचेका 'हट' फोटोहरु सामाजिक संजालमा भाइरल बनेका छन् । नायीका प्रियंकाले हालै आफ्नो अफिसियल इन्ट्राग्राम एकाउन्ट मार्फत उक्त फोटो सेयर गरेकी थिइन् । उक्त तस्बिरमा उनको साथमा बैकंर रविना देशराज छिन् ।
तस्बिरमा दुवै जना सुइमिङ सुटमा छन् भने दुवैलाई निकै 'हट' देखिएको छ । रविनाले आफ्नो इन्ट्राग्राममा विदाको दिन मनाइरहेको भन्दै परिवारसँगको केही तस्बिर राखेकी थिइन् । उनले आफ्नो फोटो सार्वजनिक गरेसंगै अहिले यी तस्विरहरु सामाजिक संजालमा भाइरल भएका छन् । पछिल्लो समय अभिनेत्री कार्की र बैकंर रविना पछिल्लो समय नजिक छन् । बैंकर रबिनाका छोरा नायक आयुष्मान र नायीका प्रियंका कार्की बीचको प्रेम सम्बन्धबारे चर्चा चल्ने गरेको छ ।
पेशाले बैंकर भएकाले रविनाका यी फोटोहरुलाई केहि अन्य बैंकरहरुले आलोचना गरेका छन् ।